Kufambisa Kwekuremara Scholarship Chirongwa - Karman Healthcare
Vakahwina 2019 Karman Healthcare Mobility Kuremara Scholarship yakaziviswa. Makorokoto kune vanogamuchira 2019 kudzidza uye ndinokutendai kune vese vakapinda! Iko 2020 kudzidza kutumira iko zvino kwavhurwa. Kuendesa kunogamuchirwa kuburikidza Nyamavhuvhu 1, 2020.
ONA 2019 VANHU
Vapfuura Scholarship Vanokunda
2020 Mobility Kuremara kudzidza
Karman Healthcare inodada nekuzivisa kuti tichave tichipa vadzidzi vekoreji neyunivhesiti ne scholarship opportunity kuvabatsira kuzadzisa zvinangwa zvavo zvekupedzisira muhupenyu.
Tichave tichipa maviri madhora mazana mashanu emadhora yevadzidzi vanyoresa izvozvi vanosangana nezvinodiwa.
Iyi fundo inoshanda kune vadzidzi vane Mobility Kuremara, akabudirira muzvidzidzo uye avo vane hanya nazvo Kuremara kuziva muAmerica.
Vese vanyoreri vanyoreri vanosangana nematanho vanogamuchirwa kuendesa kunyorera kwavo kune gore rino Karman Healthcare Scholarship Fund.
Rombo rakanaka uye tinotarisira kuti ndiwe unokunda!
Sarudza chiitiko kubva kuhupenyu hwako uye tsanangura kuti chakachinja sei kukura kwako.
Nguva yakatarwa ye2020 kudzidza ndeye September 1, 2020. Ndokumbira utumire zvinotevera zvinodiwa pasati pasvika nguva yekupedzisira.
Vadzidzi vanotora chikamu vanofanirwa kuita zvinotevera:
Inofanirwa kunge ikozvino yakanyoreswa kukoreji inozivikanwa kana kuyunivhesiti kuUS
Akwegura gumi namatanhatu (16) makore kana kupfuura
Vhura kune ese koreji, uye vadzidzi veyunivhesiti vane Mobility Kuremara vanoshandisa wiricheya, kana zvimwe Mobility zvishandiso nguva dzose.
Chengetedza chikwata chepakati peji yevheji (GPA) ye-2.0 (kana yakaenzana)
* Kune muganho wedzidzo imwechete pamudzidzi pagore, chero mudzidzi anogona kuhwina iyo kudzidza kamwe chete mugore rimwe chete.
Ndokumbira utitumire runotevera ruzivo sekukumbirwa sezasi. Zvese zvinyorwa zvinoda kutumirwa se .doc, .docx, kana .pdf faira:
Chirevo kana chinyorwa cheGrade Point Avhareji yako (GPA) - zvisiri pamutemo zvinyorwa zvakagamuchirwa.
Tumira chinyorwa kupindura theme yegore rino. Kana iwe uri kutumira mune yako kutumira, ndapota shandisa yakajairwa saizi 8.5 mukati. X 11 mukati. Bepa kuendesa yako yekupinda. Kana iwe uri kutumira yako chinyorwa kuburikidza neemail, inofanirwa kunyorwa uye chengetwa se .doc, .docx, kana .pdf faira.
Uchapupu hwe Mobility Kuremara tsamba yechiremba. (inoshanda mukushandiswa kwemazuva ese kwe Mobility mudziyo.)
Mufananidzo wewako wega unozoiswa pamhepo kana ukasarudzwa semukundi.
Disclaimer: Hatisi kuzokwanisa kudzorera chero kutumira kwakatumirwa kukero yekutumira.
Tumira zvinhu zvose kune:
Kana email zvinhu zvese ku: masomohip@karmanhealthcare.com
Chii chinonzi kudzidza?
Dzidzo ingori mari inoitwa kuwanikwa nemubatsiri kubatsira dzidzo yemudzidzi yausingatarisirwe kubhadhara. Ivo vanopihwa kazhinji zvinoenderana nekubudirira kana kukwikwidza.
Chii chakakosha sehumbowo hwekubvuma / kunyoresa?
Nekubata kuyunivhesiti, ivo vanozogona kubatsira kutora gwaro rinoratidza kubvuma kwako (kana iwe wave kuda kupedza koreji kana chikoro chesekondari) kana kunyoresa (kana iwe uchitova mudzidzi wepayunivhesiti) - chero zvakakodzera. Nguva yemuenzaniso ichagamuchirwa seuchapupu.
Ndeipi nguva yekupedzisira yekuendesa yangu chinyorwa?
Nyamavhuvhu 1st. Mapindiro anoendeswa mushure meizvi achazorambwa otomatiki.
Karman Healthcare achasarudza sei anokunda?
Vatongi vanoshandisa iyo merit-based yekukora nzira iyo inotarisa zvakanyanya pa unhu zvemukati wenyaya yako uye kukodzera kwekushandisa kwako. Mitsara inofanirwa kuratidza kutsvagisa, ruzivo rwega uye maonero, kutsoropodza uye kufunga kwekufunga.
Anokunda achaziviswa sei uye riini?
Uyo anokunda achaziviswa nefoni kana e-mail kuti ivo ndemumwe wevakakunda vaviri. Isu tichaonana nedhipatimendi rako rekubatsira mari kuti uvazivise uye kuunganidza ruzivo. Iri peji richavandudzwa pamwe neakakunda ruzivo kana ivo vanokunda vasarudzwa.
Ini ndinogamuchira sei iyo kudzidza?
Tichaonana nemubatsiri wezvemari / kudzidza / bursar kana kuonana kwakaenzana muyunivhesiti / kukoreji uyo achatiudza maitiro ekutumira cheki kwavari yemubhadharo unoenderana nechikoro.
Ndine mumwe mubvunzo. Ndiani wandinogona kutaura naye?
Inzwa wakasununguka kutumira email mibvunzo ku masomohip@karmanhealthcare.com uye tichadzoka kwauri nekukurumidza sezvazvinogona.
Follow tiri Facebook, Twitter, Instagram, uye YouTube
Kutsigira Karman Healthcare's Mobility Kuremara Scholarship, tarisa zvimwe zvezvigadzirwa zvedu: